Manchester United oo doonaysa inay la soo saxiixato difaac ka tirsan kooxda Juventus – Gool FM
(Manchester) 26 Abriil 2018. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ee Waddanka Ingirisika ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay suuqa xagaaga la soo saxiixato difaaca naadiga Juventus ee Joao Cancelo.
Man United waxa ay suuqa ka baadi goobaysaa daafac garabka midig ah, waxaana ay rabtaa inay shaxdeeda ku soo biiriso xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo macallin Ole Gunnar Solskjaer uu sidoo kale difaacyada uu suuqa ka doonayo ku darsaday laacibka kooxda Crystal Palace ee Aaron Wan-Bissaka.
Yeelkeede, sida uu warinayso Warsidaha TuttoMercatoWeb kooxda ka dhisan horyaalka Premier League ayaa haatan diiradda u weecisay xiddiga xulka qaranka Portugal ee Cancelo, kaasoo ay doonayso inay keento garoonka Old Traffrod.
24-sano jirkaan ayaa ciyaaray 28 kulan oo horyaalka Serie A iyo Champions League ah xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey kooxda Juventus, laakiin waxaa la soo jeedinayaa in ciyaaryahankii hore ee kooxda Valencia ay Man United ka doorbidayso Wan-Bissaka oo uu ka raqiisan yahay.
Cancelo ayey door-bidaysaa kooxda Man United inay la soo wareegto kaasoo heshiiskiisa uu ku joogo Magaalada Turin uu ku eg yahay sanadka 2023-ka, halka Wan-Bissaka qandaraaskiisa uu kula jiro kooxda Palace uu ka dhacay sanadka 2022-ka.